coded တီဗီကို Samsung decipher ကိုကူညီပါ? ပထမတစ်ချက်မှာ Samsung ကတီဗီနာမကိုအမှီရုံတည်ရှိသောအက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုအများကြီးတွှေ, ကမဆိုနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ တကယ်တော့အများအပြားအက္ခရာများအားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်ကိုတစ်ခုခု, ...
အိမ်မီးဖိုချောင်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးဟာတိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်အီလက်ထရောနစ်စစ်ဆေးမှုများ scales? ဆေးဆိုင်များသင်တန်း၏, တိကျမှန်ကန်သောအကြေးခွံများနှင့်အလေးရှိသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်များအတွက်အလေး လာ. တောင်းချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
အဆင့်ပြောင်းကုန်ပြီ? ယင်းအဆင့်တွင်ပြောင်းကုန်ပြီကဘာလဲ? အပြောင်းအလဲအဘို့အကြောင်းပြချက်? ရိုးရှင်း by: .. တိုက်နယ်အတွင်းရှိဓာတ်ပြုဒြပ်စင်၏ရှေ့တော်မှောက်အဘို့အကြောင်းပြချက်ပြောင်းလဲဒါကြောင့်သူတို့ကစုပြုံများနှင့်လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်လွှတ်ပေးမည်လေ့ရှိပါသည် ...
အဆိုပါဒိုးနတ်၏စက်ဝိုင်းအလယ်ဗဟို၏ဗဟိုနှင့်အချင်းဝက်အတွင်းတစ်ပြိုင်နက်တည်း vkug vrashaetsya သောအာဖရိကကိုယ်စားပြုအထူးပုံသဏ္ဍာန်ကိုရေဝဲထဲမှာအင်ဂျင် Shaubergera ရေဝဲ၏စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမဆိုတာဘာလဲ။ ဒါပေမယ့် ...
မဆိုးငါကပို amperage နှင့်အတူ charging ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့ရှိသည်? အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ display (မတစ်ချိန်ကပေမယ့်တဖြည်းဖြည်း) ကိုမီးရှို့စေနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် display ကိုလူအပေါင်းတို့သည်, လုနီးပါးထင်ရှားစေခြင်းငှါအလျှင်းမကြောင်းထိုကဲ့သို့ရောက်ရှိ ...
ကွိုင်၏ inductance ကိုတိုင်းတာပုံ Freebie အလုပ်မလုပ်ပါ။ Inductance တိုင်းတာခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ DC multimeter တစ်ခုတည်းဖြင့်၎င်းကိုသင်မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ချဉ်းကပ်မှုများစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအရာ, induction ...
ဂျာမနီမှာမော်စကို transmitter DCF77 Maynflingene (Frankfurt ၏ 77 ကီလိုမီတာအတွင်းတောင်ဘက်-အရှေ့) တွင်ရေဒီယိုအချိန် signal ကို DCF25 မနှင့်တန်ခိုးနှင့် 77,5 kHz မှာအသုံးခံသွားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒီ chip ကိုကားအဘယ်သို့ ??? က ဟူ. ခေါ်ဝေါ်သော ???? HEF4094BP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17726/PHILIPS/HEF4069UBP.html link ကိုအုပ်ချုပ်ရေးကုဒ် converter ကို HEF4094BP KR1561PR1 ရုရှား analogue ဒစ်ဂျစ်တယ် converter ကို chip ကိုကုဒ်ရှစ်-bit မှာပြောင်းကုန်ပြီမှတ်ပုံတင်များ၏မူကြမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအပေါ်သော့ခတ်နေသည် အမှတ်စဉ်-in ကို ...
အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့်တီဗီမီနူးတို့တွင်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းမရှိသည့် PHILIPS TV ဟောင်းတစ်ခုတွင်လိုင်းများကိုမည်သို့ညှိရမည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ မီနူးမှာအရာအားလုံးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်“ channel tuning” - ဒါတော့မဟုတ်ဘူး။
ကင်မရာဘာအကွာအဝေးကိုရှာဖွေရမလဲ။ Nikon D3100 ကင်မရာအကွာအဝေးမှာအဆိုးရွားဆုံးမဟုတ်ပါ။ ငါကြည့်ပြီးကလေးတွေကကျောင်းမှာစာမေးပွဲဖြေတာကိုဘယ်လိုဖြေကြသလဲ၊
အထဲမှာဘာငါ့ကိုပြောပြပါနှင့်ရေနံစုပ်စက် jack ကိုအပြေး ကျေးဇူးပြု. ? ၎င်း၏အမေရိကန်နိုင်ငံသားလည်းပထမဦးဆုံးစတင်မှာစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်ရှိပြီးသောပစ္စတင်များကဲ့သို့အလွန်ကောင်းစွာတည်ရှိသောအရာတစ်ခုခုအတွက်သူ၏ဦးခေါင်းကိုလှုပ်မြည်းကိုခေါ် ...
ငါ "Dummies for electrics" လိုမျိုးစာအုပ်ရှာနေတာ။
ငါ "Dummies for electrics" လိုစာအုပ်မျိုးကိုရှာဖွေနေတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ "ငါလျှပ်စစ်သမား" ပါတဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ရှိတယ် !!! Rudolf Svoren "အီလက်ထရွန်နစ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်။ " ယခုနှစ် 1986 ။ သူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နဲ့မစတင်ခဲ့ဘူး ဤစာအုပ်အတော်များများ ...
AF နှင့် TA လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဘို့အလော စတီရီယိုစနစ်များပျေါအဘယျတဲ့ function ကို: AF နှင့် TA? သူတို့ဘာလုပ်သလဲ? AF ။ အခြားရွေးချယ်စရာကြိမ်နှုန်း (Alternative frequency များစာရင်း) စာရင်းများစာရင်းအခြားရွေးချယ်စရာ၏ display ကိုပေါ် ...
ping ရဲ့အင်ဂျင် Megger တူသော? Megger အဆိုပါ nadzhny နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းမော်တာ၏အလောင်းတော်ကို, ထိုအကွေ့အကောက်များသောနှင့်မတ်စောက်ပေါ်တွင်ဒုတိယ terminal ကိုအတူ megaohmmeter တဦးတည်းအဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ခြင်း, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ပိုကောင်း။ ပုံမှန်အားဖြင့်အခါမြှား ...
သူအစောပိုင်းက zapantentoval အလင်းကိုမီးသီးတစ်ခုမှာတီထွင်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကပထမဦးဆုံးအလင်းမီးသီးများနှင့်ဘက်ထရီရှေးခေတ်ကာလ၌ဗာဗုလုန်တီထွင် ... ကျွန်တော်သိသောသူတို့တီထွင်မှုရုံတစ်ခုပညာသင်နှစ် plagiarism ...
DVD player သည်ကျွန်ုပ်သိသော USB flash drive ကိုမဖတ်ရ။ Flash drive တစ်ခုတွင်သင်၏ဖိုင်စနစ်ကဘာလဲ။ မကြာသေးမီကအသုံးပြုထားသော NTFS နှင့် FAT32 ငါသည်သင်တို့ကို NTFS ကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေသည်မှာသေချာသည်။
ပိုကောင်းတဲ့အရာဟူမူကား, rosin, ဂဟေအမဲဆီသို့မဟုတ်အက်ဆစ်? ငါဖော့စဖောရက်ထွန်းလင်းမေးပါသုံးပါ။ အဘယ်အရာကိုဂဟေဆက်သွားသလဲ? အပြုံး, သင်ပေးမဟုတ်မကောင်းတဲ့ရှိသေး၏။ သံဖြူ hochot သတ္တုကပ်မထားလျှင်, အက်ဆစ်နဲ့ကုသ။ ထိုအ ...
ဘယ်နှစ်ယောက် megabits, တဦးတည်း megabyte .... သေချာဘို့လိုအပ်ပါတယ် ..
တစ် megabyte ထဲမှာဘယ်လောက် megabytes .... သင်တိတိကျကျသိဖို့လိုသည်။ အနီးစပ်ဆုံး၊ megabit သည်အချက်အလက်ပမာဏနှင့် megabytes များကိုတိုင်းတာသည့်ယူနစ်ဖြစ်သည်။ အမြန်နှုန်းကို megabits / s သို့မဟုတ် megabytes / s ဖြင့်တိုင်းတာသည်။
ရဟတ်ဆိုတာဘာလဲ ဓာတ်ပေါင်းဖိုဆိုတာဘာလဲ လှည့်လည် pliz ROTO- လှုပ်ရှားမှု, လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်။ Stator - တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ငြိမ်သက်မှု၊ လျှပ်စစ်စက်များတွင်နှစ်မျိုးလုံးအကွေ့အကောက်များနိုင်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယား DC မော်တာ။
အိမ်တွင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်မီးလုံးပြုလုပ်နည်း။ DRL အဝတ်စတစ်ထည်ကိုထုပ်။ အပြင်ဘက်မီးသီးကိုခွဲပါ။ (CAUTION MERCURY!) မီးအိမ်၏အတွင်းပိုင်းသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏“ လင်းကျောက် burner” ဖြစ်သည်။ အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်သည် ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 2,336 စက္ကန့်ကျော် Generate ။